မုန်တိုင်းငယ်မှ အဆင့်တက်ကာ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဘာဘ်ဘယ်” အဖြစ်သို့ရောက်ရှိ - Swelsone News
မုန်တိုင်းငယ်မှ အဆင့်တက်ကာ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဘာဘ်ဘယ်-BULBUL” အဖြစ်ရောက်ရှိ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်) (မြန်မာစံတော်ချိန်(၀၆:၀၀) နာရီ အချိန် ထုတ်ပြန်ချက်)
၁။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၆:၀၀)နာရီ အချိန်တွင် မိုးလေဝသ နှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း အခြေအနေ ကို အောက်ပါ အတိုင်း လေးစားစွာ အစီရင်ခံအပ်ပါသည်-
(က) ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အခြေအနေ
(၁) ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၅:၃၀)နာရီအချိန် တိုင်းထွာချက်များ အရ ဘင်္ဂလားပင်လယ် အော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက် ရှိသော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အားကောင်းသော မုန်တိုင်းငယ် (Deep Depression) သည် ပိုမို အားကောင်း လာခဲ့ပြီး၊
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း(Cyclonic Storm) “ဘာဘ်ဘယ်” (BULBUL) အဖြစ်ရောက် ရှိခဲ့ကာ၊
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မာယာဘန်ဒါမြို့ (Maya Bandar) (ကပ္ပလီကျွန်း-Andaman Islands) ၏ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက် ရေမိုင်(၂၂၀) မိုင်ခန့်၊
ပါရာဒစ်ပ်မြို့(Paradip) (ဩရိဿ-Odisha) ၏ တောင်-အရှေ့တောင်ဘက် ရေမိုင် (၄၁၅) မိုင်ခန့်၊
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ပုသိမ်မြို့(Pathein) ၏ အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင် (၃၆၀) မိုင်ခန့်နှင့် ဂွမြို့(Gwa) ၏ အနောက်တောင်ဘက် ရေမိုင် (၃၈၀) မိုင်ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင် ကို ဗဟိုပြုနေပါသည်။
(၂) ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဘာဘ်ဘယ်” (Bulbul) ၏ လက်ရှိအခြေအနေမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျား မည့် အခြေအနေ မရှိသေးသဖြင့် အဝါရောင်အဆင့် ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။
(ခ) ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း၏ တည်နေရာ၊ ဗဟိုချက်လေဖိအားနှင့် လေတိုက်နှုန်း
(၁) အဆိုပါ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဘာဘ်ဘယ်” (BULBUL) သည် မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၅:၃၀) နာရီ အချိန်တွင် မြောက်လတ္တီကျု(၁၃.၈) ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု (၈၉.၃) ဒီဂရီတွင်ရှိပြီး၊ ဗဟိုချက်လေဖိအား (၉၉၈) ဟက်တိုပါစကယ်နှင့် အမြင့်ဆုံး လေတိုက် နှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် (၄၅) မိုင် နှုန်းဖြစ်ပါသည်။
(၁) အဆိုပါ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဘာဘ်ဘယ်” (BULBUL)သည် နောက် (၂၄) နာရီအတွင်း အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (Severe Cyclonic Storm) “ဘာဘ်ဘယ်” (BULBUL) အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး၊ မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက် သို့ ရွေ့လျားမည် ဟု ခန့်မှန်း ရပါသည်။
(၁) အဆိုပါ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “ဘာဘ်ဘယ်” (BULBUL)၏ အရှိန်ကြောင့် ယနေ့နံနက် မှ နောက် (၄၈) နာရီ အတွင်း မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်၊
နေပြည်တော်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကယား ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ် တို့တွင် နေရာကျဲကျဲနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသ ကြီးနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသ ကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တို့တွင် နေရာ ကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။
(၂) မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် ရံဖန်ရံခါ မိုးသက် လေပြင်းများ ကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးမည်။ မိုးသက်လေပြင်း ကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင် လေသည် တစ်နာရီလျှင် မိုင်(၄၀)အထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါသည်။ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြန်မာ့ ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင် တို့တွင် (၈) ပေမှ (၁၂) ပေခန့် ရှိနိုင် ပါသည်။
၂။ အဆိုပါ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း “ဘာဘ်ဘယ်”(BULBUL) ၏ အရှိန်ကြောင့် ပြည်တွင်း လေကြောင်း ပျံသန်းရေး၊ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန် ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိ ကမ်းနီး၊ ကမ်းဝေး ငါးဖမ်း ရေယာဉ်များ၊ သင်္ဘောများ အနေဖြင့် လည်း ကြိုတင် သတိပြုနိုင်ပါရန် အသိပေးနှိုးဆော် အပ်ပါသည်။
မုနျတိုငျးငယျမှ အဆငျ့တကျကာ ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျး “ဘာဘျဘယျ-BULBUL” အဖွဈရောကျရှိ
(၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလ ၇ ရကျ) (မွနျမာစံတျောခြိနျ(၀၆:၀၀) နာရီ အခြိနျ ထုတျပွနျခကျြ)
၁။ ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလ(၇)ရကျနေ့ မွနျမာစံတျောခြိနျ (၀၆:၀၀)နာရီ အခြိနျတှငျ မိုးလဝေသ နှငျ့ ဇလဗဒေညှနျကွားမှု ဦးစီးဌာနမှ ထုတျပွနျသညျ့ ဆိုငျကလုနျး မုနျတိုငျး အခွအေနေ ကို အောကျပါ အတိုငျး လေးစားစှာ အစီရငျခံအပျပါသညျ-
(က) ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျး အခွအေနေ
(၁) ယနမွေ့နျမာစံတျောခြိနျ (၀၅:၃၀)နာရီအခြိနျ တိုငျးထှာခကျြမြား အရ ဘင်ျဂလားပငျလယျ အျောအရှအေ့လယျပိုငျးနှငျ့ ယငျးနှငျ့ဆကျစပျလကျြ ရှိသော ဘင်ျဂလားပငျလယျအျော အရှတေ့ောငျပိုငျးတှငျ ဖွဈပျေါနသေော အားကောငျးသော မုနျတိုငျးငယျ (Deep Depression) သညျ ပိုမို အားကောငျး လာခဲ့ပွီး၊
ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျး(Cyclonic Storm) “ဘာဘျဘယျ” (BULBUL) အဖွဈရောကျ ရှိခဲ့ကာ၊
အိန်ဒိယနိုငျငံ၊ မာယာဘနျဒါမွို့ (Maya Bandar) (ကပ်ပလီကြှနျး-Andaman Islands) ၏ အနောကျ-အနောကျမွောကျဘကျ ရမေိုငျ(၂၂၀) မိုငျခနျ့၊
ပါရာဒဈပျမွို့(Paradip) (ဩရိဿ-Odisha) ၏ တောငျ-အရှတေ့ောငျဘကျ ရမေိုငျ (၄၁၅) မိုငျခနျ့၊
မွနျမာနိုငျငံ၊ ပုသိမျမွို့(Pathein) ၏ အနောကျတောငျဘကျ ရမေိုငျ (၃၆၀) မိုငျခနျ့နှငျ့ ဂှမွို့(Gwa) ၏ အနောကျတောငျဘကျ ရမေိုငျ (၃၈၀) မိုငျခနျ့အကှာ ပငျလယျပွငျ ကို ဗဟိုပွုနပေါသညျ။
(၂) ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျး “ဘာဘျဘယျ” (Bulbul) ၏ လကျရှိအခွအေနမှော မွနျမာနိုငျငံ ဘကျသို့ ဦးတညျရှလြေ့ား မညျ့ အခွအေနေ မရှိသေးသဖွငျ့ အဝါရောငျအဆငျ့ ဟု သတျမှတျပါသညျ။
(ခ) ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျး၏ တညျနရော၊ ဗဟိုခကျြလဖေိအားနှငျ့ လတေိုကျနှုနျး
(၁) အဆိုပါ ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျး “ဘာဘျဘယျ” (BULBUL) သညျ မွနျမာစံတျောခြိနျ (၀၅:၃၀) နာရီ အခြိနျတှငျ မွောကျလတ်တီကြု(၁၃.၈) ဒီဂရီနှငျ့ အရှလေ့ောငျဂြီကြု (၈၉.၃) ဒီဂရီတှငျရှိပွီး၊ ဗဟိုခကျြလဖေိအား (၉၉၈) ဟကျတိုပါစကယျနှငျ့ အမွငျ့ဆုံး လတေိုကျ နှုနျးမှာ တဈနာရီလြှငျ (၄၅) မိုငျ နှုနျးဖွဈပါသညျ။
(၁) အဆိုပါ ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျး “ဘာဘျဘယျ” (BULBUL)သညျ နောကျ (၂၄) နာရီအတှငျး အားကောငျးသော ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျး (Severe Cyclonic Storm) “ဘာဘျဘယျ” (BULBUL) အဖွဈသို့ ရောကျရှိနိုငျပွီး၊ မွောကျ-အနောကျမွောကျဘကျ သို့ ရှလြေ့ားမညျ ဟု ခနျ့မှနျး ရပါသညျ။
(၁) အဆိုပါ ဆိုငျကလုနျးမုနျတိုငျး “ဘာဘျဘယျ” (BULBUL)၏ အရှိနျကွောငျ့ ယနနေံ့နကျ မှ နောကျ (၄၈) နာရီ အတှငျး မကှေးတိုငျး ဒသေကွီး၊ ပဲခူးတိုငျး ဒသေကွီး၊ ရနျကုနျတိုငျး ဒသေကွီး၊ ဧရာဝတီတိုငျး ဒသေကွီး နှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျ တို့တှငျ နရောစိပျစိပျ၊
နပွေညျတျော၊ မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး၊ တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး၊ ရှမျးပွညျနယျ၊ ခငျြးပွညျနယျ၊ ကယား ပွညျနယျ၊ ကရငျပွညျနယျနှငျ့ မှနျပွညျနယျ တို့တှငျ နရောကြဲကြဲနှငျ့ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေ ကွီးနှငျ့ ကခငျြပွညျနယျတို့တှငျ နရောကှကျကြား မိုးထဈခြုနျးရှာပွီး၊ မကှေးတိုငျးဒသေ ကွီး၊ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၊ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးနှငျ့ ရခိုငျပွညျနယျ တို့တှငျ နရော ကှကျ၍ မိုးကွီးနိုငျပါသညျ။
(၂) မွနျမာ့ကမျးရိုးတနျးတဈလြှောကျနှငျ့ ကမျးလှနျပငျလယျပွငျတို့တှငျ ရံဖနျရံခါ မိုးသကျ လပွေငျးမြား ကရြောကျပွီး လှိုငျးကွီးမညျ။ မိုးသကျလပွေငျး ကစြဉျ ရပွေငျ/မွပွေငျ လသေညျ တဈနာရီလြှငျ မိုငျ(၄၀)အထိ တိုကျခတျနိုငျပါသညျ။ လှိုငျးအမွငျ့မှာ မွနျမာ့ ကမျးရိုးတနျး တဈလြှောကျနှငျ့ ကမျးလှနျပငျလယျပွငျ တို့တှငျ (၈) ပမှေ (၁၂) ပခေနျ့ ရှိနိုငျ ပါသညျ။
၂။ အဆိုပါ ဆိုငျကလုနျး မုနျတိုငျး “ဘာဘျဘယျ”(BULBUL) ၏ အရှိနျကွောငျ့ ပွညျတှငျး လကွေောငျး ပြံသနျးရေး၊ မွနျမာ့ကမျးရိုးတနျး တဈလြှောကျနှငျ့ ကမျးလှနျ ပငျလယျပွငျတို့ရှိ ကမျးနီး၊ ကမျးဝေး ငါးဖမျး ရယောဉျမြား၊ သင်ျဘောမြား အနဖွေငျ့ လညျး ကွိုတငျ သတိပွုနိုငျပါရနျ အသိပေးနှိုးဆျော အပျပါသညျ။
← မုဆိုးမက ဇနီးထက် အပြုအစုကောင်းလို့ ဖောက်ပြန်တာပါလို့ ဝန်ခံတဲ့အမျိုးသား
အထူးသတင်း – မုန်တိုင်းနှစ်လုံးအရှိန်ကြောင့် မိုးနှင့်လေပြင်း သတိပေး →
နေပြည်တော် မူကြိုကျောင်း တာဝန်ရှိသူ ဒေါ်ဥမ္မာလှိုင်ကို ရှေ့နေများ အမှုပြန်ဖွင့်မည်
October 7, 2019 space 0
မသေပါ နဲ့ ဦးသမီးငယ်. . . .” ဒီသမီးလေး သေလို့မဖြစ်ဘူး ဆရာကြီးရယ် ” တဲ့. အမေကထောင်ထဲ မှာ (၁၁)နှစ် တဲ့
September 29, 2019 space 0
October 19, 2019 space 0